Rapper Jay-Z wuxuu wadaagayaa ra'yigiisa kadib sharciyeynta xashiishadda ee New York • Daroogada Inc.eu
Jay-Z oo caan ah oo heesaha caan ku ah, oo leh sumaddiisa marijuana, ayaa loogu yeeray warka `` mid aad u xiiso badan. ''
Jay-Z wuxuu la wadaagay qoraal kadib markii uu soo baxay warkaasi New York gobolkii ugu dambeeyay ee Mareykanka ayaa sharciyeysay isticmaalka madadaalada ee xashiishka.
Waxaa la shaaciyey usbuucii la soo dhaafay in dadka reer New York ee ka weyn 21 sano ay hada si cad uheli karaan oo ay isticmaali karaan ilaa sedex wiqiyadood oo xashiishad ah iyadoo la raacayo sharciga sharciyeynta oo uu saxeexay Gudoomiyaha Gobolka Andrew Cuomo.
Heshiisku wuxuu awood u siinayaa keenista daroogada isla markaana u oggolaan doontaa qolal u eg sida naadiyada ama 'meelaha wax cuna' ee marijuana, laakiin aan khamriga lagu cabi karin. Shakhsiyaadka waxaa sidoo kale loo oggol yahay inay guryahooda uga soo baxaan lix geed oo marijuana ah si loogu isticmaalo shaqsi ahaan.
Sigaarka lagu cabo looma oggola iskuulada, goobaha shaqada ama baabuurka. Magaalada New York waxay mamnuucaysaa isticmaalka xashiishadda beeraha nasashada, xeebaha, jidadka laamiga, fagaaraha lugeynaya dadka lugta leh iyo garoomada ciyaaraha, halkaasoo sidoo kale mamnuuc ka tahay sigaar cabista.
Jay-Z, oo ah Sarkaalka Aragtida Sare ee Shirkadda Waalidka iyo sumadiisa marijuana 'Monogramayaa soo saaray bayaan ku saabsan sharciyeynta dalkiisa hooyo:
“Warka ku saabsan sharciyeynta xashiishka ee magaalada New York waa mid xiiso leh. Waxay u taagan tahay fursad muddo dheer la sugayay oo loogu talagalay dadka reer New York, warshadaha xashiishka, iyo sinnaanta bulshada iyo caddaaladda bulshada. Waxaan indhaheyga ku arkay dhibaatada loo geystey bulshooyinka madow iyo kuwa laga tirada badan yahay qarniyadii dagaalka daroogada halkan New York. Maanta waxaan ku faraxsanahay in gobolkeyga hooyo uu ku soo biirayo si loogu gogol xaaro suuq xasiloon oo xasiloon. “
Jay-Z, oo ah Sarkaalka Aragtida Sare ee Shirkadda Waalidka oo leh sumaddiisa marijuana 'Monogram' (afb.)
New York hadda waxaa la filayaa inay noqoto mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee xashiishka sharciyeysan ee Mareykanka iyo mid ka mid ah gobollada yar ee sharciyeynta ay si toos ah ugu xiran tahay sinnaanta dhaqaalaha iyo sinjiga.
Ilaha ay ka mid yihiin NME (EN), NYTimes (EN), TheGrio (EN), WSJ (EN)
Americacannabisbeerista cannabisgo'aan qaadashomadadaalosharci ahaansharciyeyntasharci-dejintaNew YorkMaraykankabeerista cannabis
Cannabidiol (CBD) iyo cannabidiolic acid (CBDA) labadaba waa la yaqaan oo la heli karaa xeryahooda kiimikada ee asaliga u ah ...
Bixinta xashiishka sharciyeysan ee Kalifoorniya wuxuu ballanqaadayaa inuu qallajin doono illaa gu'ga ...
Cannabis iyo unugyada kansarka - Cilmi-baaris cusub oo ka socota Jaamacadda Australia
Taageerayaasha xashiishadda dawada ah ayaa tilmaamay astaamaha ka hortagga kansarka ee ...